Malunga nathi - Yongguang Line Equipment Co, Ltd.
Izixhobo zentambo yamandla
Ulungiso loMda osentloko
Umkhuseli kunye neFuse cutout
Ukuzingela ngokwakho iBolt
Bhalela i-HEBEI Yongguang
I-HEBEI YONGGUANG IMALI YOKUFUNDA I-CO., LTD. lushishino lwekhnoloji ephezulu ekhethekileyo kwimveliso, iR & D kunye nentengiso. Indawo yaseYongguang kwindawo edumileyo ebizwa ngokuba yi "Capital of Electric" e-China-Yongnian, indlela eyi-107 yeSizwe, kwisikhululo seenqwelomoya sase Handan nakwisikhululo sikaloliwe.
Inkampani eyasekwa ngonyaka ka-1995, singumvelisi wobuchwephesha kuMbane oFakela izixhobo zoMbane, ngakumbi kwilayini efanelekileyo yokufakelwa kunye nokufakwa kwezinto zokufakelwa, abaqulunqi bezinto ezihlanganisiweyo, abahlali baseArrester, abahamba ngezinto zokucima ukuphuma, izixhobo zoMbane ezinjengokuhambisa umbane kunye neemveliso zokuhambisa. Lo mzi-mveliso uhlala kwindawo engama-8000m2, unabasebenzi abangaphezu kwama-200, kubandakanya namagcisa angamagcisa angama-40.
Umzi-mveliso uneqela elinamandla obuchwephesha, ubugcisa obuphambili, izixhobo zokuhlola ezizeleyo.
Iimveliso zethu zidlulile kuvavanyo ngeLayibhile yovavanyo lwe-CECP yamandla. Umzi-mveliso wamandla ombane- Iziko lokuhlola umgangatho wombane wesixhobo kunye neZiko loPhando iXi'an HV. Iimveliso zethu 'zithembekile ngomgangatho kunye nokusebenza kakuhle kufumene udumo oluhle kwimarike yangaphakathi nangaphandle. Ngaphandle koko, sidlule kwisatifikethi se-CE, inkqubo ye-ISO 9001, nenxalenye yemveliso ukuya kwinqanaba elithile kumazwe aseYurophu akhulayo kwezoqoqosho.
Iimveliso zethu zithunyelwe kwelinye ilizwe e-Asia, Oceania, eMelika, kuMzantsi Melika Middle East, e-Afrika njl.
Ngolawulo oluqhelekileyo lwamashishini, indlela yokusebenza eguquguqukayo kunye neyona nto intle emva kwentengiso, inkonzo eqhubekayo, yenza ukuba inkampani yethu ikhawuleze ibe lelinye lamashishini anokubakho. Inkampani ibambelele kumgaqo "wobomi ubomi, isithunzi sisiseko", ukubonelela abathengi ngemveliso ekumgangatho ophezulu kunye nenkonzo eyonelisayo.
Samkela ngokufudumeleyo izihlobo ezivela kwihlabathi liphela ukuze zixoxe ngeshishini kwaye zisebenzisane nathi kuphuhliso lwamandla ehlabathi!
Kwindibano ye-Shahe kunye ne-Dongguajing Village, i-Liuying County, i-Yongnian District, iHadan City, kwiPhondo laseHebei, e-China
Afakiwe Iimveliso - eKhaya